I-Sea Food Friggitoria - iMessina
Ukuthokozela kanye nokuthokozela izitsha zokudla zasemgwaqweni
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-23)
Ukudla okufryer nokudla kwasolwandle eMessina, ihlinzeka ngokudla futhi ihambise izitsha zezinhlanzi ezithosiwe ngesitayela esiphelele ukudla komgwaqo.
I-Friggitoria Cucina di Mare - Izibiliboco zasolwandle nokuningi
I-Sea Food Fryer, enhliziyweni kaMessina, kuletha idolobha indlela entsha yokwethula nokunambitha izitsha zezinhlanzi, ngokuhambisana nesiko lokudla komgwaqo. Indawo yokudlela ilungisa izitsha zenhlanzi ezimnandi ngokuzithambisa nokuzethula ngendlela ejwayelekile "Cuoppo" okungenye yezinto ezifakiwe zokudla komgwaqo. Lapha i-cuoppo di fritture, isikhumba esidumile esenziwe ngesigaxa, sizonikezwa kuwe esigcwele izinhlanzi ezimnandi ezithosiwe nokuningi.
I-Friggitoria eMessina - Zonke izinhlanzi ozifunayo ngendlela yazo emnandi
At I-Sea Food Fryer uzokwazi ukunambitha izinhlobonhlobo zezitsha zezinhlanzi: i-shrimp cuoppo, di i-franceschiniimbaza, squid, squid kanye amasilayidi. Futhi uzothola ama-crepes amantombazane wezingane, ama-bowfish noma ama-tuna Steak kanye nama-rollfish rolls, kanye nemifino eyosiwe kanye nama-fries aseFrance angafinyeleleki ukuze uhlangane nokuthandwa ngumuntu wonke. Noma ngabe ufuna ukunambitha lonke iphunga le-cuoppo noma inhlanzi entsha entsha ephekwe ngentshiseko, le indawo efanele.
ICucina di Mare Friggitoria - Ukunambitha nentshisekelo enkabeni yeMessina
Flavour ukuthi uzothola ithuba ukunambitha at I-Sea Food Fryer bazokukhumbuza ngokushesha ngephunga lolwandle okuthi ngalo, kuhlanganiswe nentshisekelo nendlela yendabuko izitsha ezilungiswa ngayo, izophenduka umuzwa wokunambitheka okungenakuqhathaniswa. Ukusha, ubuqiniso kanye nogqozi yizimpawu ezintathu kuphela zokudlela zokudlela.
ICucina di Mare Friggitoria - Nambitha ngqo ekhaya
I-Sea Food Fryer itholakala maphakathi ne-Messina, lapho umoya wokwamukela nabasebenzi abanobungani bezokusiza ukwenza amakhefu akho okudla kwasemini namadina abe mnandi kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, uma uncamela ukunambitha zonke izibiliboco zasekhaya ngqo ekhaya, uzoba nethuba lokusebenzisa Isevisi yasekhaya yamahhala. Esikhathini esifushane uzoba ne-cuoppo yakho onayo ngayo yonke ubuhle bayo, amakha kanye nobuqiniso.